बिष्णु माझि जस्तै गित गाउने धनाको कसरि भयो यस्तो हालत ? – Etajakhabar
बिष्णु माझि जस्तै गित गाउने धनाको कसरि भयो यस्तो हालत ?
दुनियामा दुख नभएका मान्छे शायद कोहि छैनन् तर कोहि मान्छे यति सम्मका दुखिपनि छन् की जस्को कहानी सुन्दा आशु थामिदैनन् , मन कुडिन्छ । । यस्तै कथा, कहानी सुन्दा लाग्छ साच्चीकै मान्छेहरुको जिवन दुखले भरिएको छ ।
हामी सामान्यतय अलिकती दुख पर्नासाथ ‘म जस्तो दुखि कोहिपनि छैन सोच्छौ’ तर संसारमा यतिसम्मका दुखि छन् की जस्को बच्पन अभाव र तिस्कारमा बित्यो, जस्ले आफ्नै परिवारबाट तिरस्कार भोगिरह्यो, चाहेपनि पढ्न पाएन, अघाउन्जेल खान पाएन । तव सोच्न मन लाग्छ ‘यस्ता दुखका अगाडि त हाम्रा सानातिना दुख केहि होईनन् ।’ यस्तै दुखले भरिएकीदैलेखकी २१ बर्षिया धना परियार जस्को कथाले सबैलाई रुवाउछ ।
३ बर्षको उमेरा आगोमा जलेकी धना आफ्नो पिडा सुनाउदै मिडियामा आएकी छिन् । आमा महिनावारी भएको बेला आमासंगै छाउगोठमा सुत्न गएकी धना त्यहि बेला गोठमा लागेको आगोमा परेर जलेकी हुन् । हात र मुख जलेकी धना आफुलाई जन्मदिने बाबालाई बाबा भन्न नपाउदा भक्कानिन्छिन् । बाबाको माया, स्नेहकी भोगी धनाले गाउँघर र बिद्यालयमापनि शिक्षकको माया पाईनन् । घरमा बाबाको हेला र बिद्यालयमा शिक्षकको हेलाका बिचमा हुर्किएकी धनाले आमा र भाईको साथ र मायाले गर्दा मात्रै बाँच्न सकिन् ।
बाबाले नहेर्न घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाकारणले अरुले फालेका कपिका टुक्रा, टुक्रा जोडेर कपि बनाएर कक्षा ५ सम्म पढेको उनले बताईन् । बिकसीत ठाउँमा भएको भए र बाबाको साथ पाएको भए आफु निको हुने धनाको बिश्वास छ । दुनियामा कसैले आफुलाई साथ नदिने, माया नगर्ने सोच धनामा थियो कारण सानैमा सबैकोघृणासंगै हुर्किनुपरेको नमिठो यथार्थ ।यहि कारणले गर्दापनि त्यति मिडियामा आउदिनन् ।
अनेकौ देख, अभाव र पिडाकाबिचमा पनि हास्न सिकेकी धनाको आवाज निकै मिठो छ र गीत गाृने चाहापनि आफ्नो भएको उनको भनाई छ तर आगोमै जलेका कारण उनि शारिरीक रुपमा निकै अशक्त बनेकी छिन् उनको टाउकोमा कपाल छैन, उनिले एउटा आँखापनि देख्दिनन् यस्तो अवस्था भएको कारण मन हुदाहुदै, आवाज मिठो हुदाहुदैपनि उनले राम्रोसंग गाउन नसक्ने बताउछिन् । आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने कारण गाउन गाह्रो हुने उनको भनाई छ । अहिले धनाको आवाजमा धेरै गीतहरु रेकर्ड भैसकेका छन् र बजारमा पनि आउने क्रम जारी छन् । बिभिन्न माध्यम र बयक्तिहरुबाट अहिले धनाले साथ र सहयोगपनि पाईरहेकी छिन् । उनै धनासंग गरिएको कुराकानी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण १२, २०७५ समय: ११:५१:०३